फिल्म ‘पीके’ को सिक्वेल घोषणा, मुख्य भूमिकामा रणवीर ! | Nepal Ghatana
फिल्म ‘पीके’ को सिक्वेल घोषणा, मुख्य भूमिकामा रणवीर !
प्रकाशित : ९ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०६:४५
बलिउड फिल्म ‘पीके’ को सिक्वेल बन्ने भएको छ ।
आमिर खान,अनुष्का शर्मा र स्वर्गीय सुशान्त सिंहको मुख्य अभिनय रहेको सन् २०१४ को सर्वाधिक सफल फिल्म पिकेको सिक्वेल बन्ने भएको हो ।
सन् २०१४ मा रिलिज फिल्म ‘पीके’लाई दर्शकले अत्याधिक मनपराए । अभिनेता आमिर खान र अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अभिनित फिल्ममा विशेषतः आमिरको भूमिकालाई दर्शकले रुचाए । अहिले भने यो फिल्मको सिक्वेल बन्ने नयाँ खबर बलिउडमा छ ।
फिल्मको सिक्वेलमा आमिरको स्थानमा रणवीर कपूर देखिनेछन् । यो फिल्म सकिँदाको अन्तिम दृश्यमा रणवीर कपुर देखिएका थिए । त्यहीकारण फिल्मको सिक्वेलमा रणवीरले नै बाँकी कथालाई अगाडि बढाउनेछन् ।
फिल्ममा रणवीर कपूरको क्यारेक्टर दोस्रो प्लानेटबाट पृथ्वीमा आएको देखाइएको छ । सिक्वेलमा रणवीरले नै फिल्मको कहानी अगाडि लैजाने छन् ।
‘हामी सिक्वेल बनाउनेछौं । हामीले पहिलो संस्करणको अन्त्यमा रणवीर कपूरलाई देखाएका थियौं । यो फिल्मको अगाडिको कथा लुकेको छ । यद्यपि हालसम्म अभिजात जोशी(फिल्मका लेखक)ले कथा लेखिसकेका छैनन् । जुन दिन उनले कथा लेखिसक्छन्, त्यसपछि सिक्वेलको तयारी शुरु हुन्छ ।’ कहानी लेखेर सकिने बित्तिकै फिल्म सुरु गरिने निर्माता विधुको भनाइ छ ।
अभिनेत्री निधी अग्रवालका फ्यानहरुले उनको नाममा मन्दिर बनाए
द कपिल शर्मा शोमा पुनः कपिल र सुनि ग्रोवरको दोस्ती देखिने
भारतीय अभिनेता सन्दीप नाहरले श्रीमती र सासुआमाले ब्ल्याकमेल गरेको भन्दै गरे आत्महत्या